Ipa - Prairie State Legal Services
Fonera kuti upe nerunhare:
Dzvanya bhatani "DZIMAI ZVINO" pazasi
Tumira mipiro ku:
Amai vanopunyuka kushungurudzwa mudzimba, mhuri yakatarisana nekudzingwa, kana murwi akarasikirwa nezvibatsiro zvake: nekupa kuPrairie State Legal Services, iwe unobatana nemagweta edu nevashandi kuti mushandire vavakidzani vako vanonyanya kuda. Pazasi pane dzimwe shoma dzenzira dzaunogona kubatana nesu:
Nekupa pamwedzi, iwe unoratidza kuzvipira kwako kuenderera kuchinangwa chedu chekupa mukana wakaenzana kururamisiro. Paunopa pamwedzi, mari yako yaunosarudza inozobviswa otomatiki kubva kuaccount yako pazuva raunosarudza.
Kubatana kwegore negore / kutsigira
Kana bhizinesi rako kana kambani yemutemo ichida kutsigira imwe yezvedu zviitiko zvemo, email Jennifer Luczkowiak, Director weBudiriro, pa [email inodzivirirwa].
Zvipo zvekuchengetedzeka ndiko kuchinjiswa kwemasheya, zvisungo, nezvimwe zvekuchengetedza, kunyanya izvo zvakawedzera mukukosha. Kuti uwane mirayiridzo yekupa chipo chekuchengetedza kuPrairie State, ndapota nyorera Prairie State Administrative Hofisi pa (815) 965-2134.
Iwe unogona kupa kuPrairie State mukuremekedza kana mundangariro yechiitiko chakakosha kana munhu.
Kana wako waunoshandira akaenzana nezvipo, unogona kukwanisa kupamhidzira kana kutowedzera katatu mupiro wako. Zvirongwa zvekufananidza-zvipo zvinowanzo fananidza zvese kana muzana yezvipo zvevashandi kumasangano erudo. Bata vashandi vako vevashandi kuti udzidze kana ivo vachipa yakafanana-chipo chirongwa.
Chipo chekusiya chirevo chiri nyore muchido chako chinopa kuPrairie State chero chinotevera:
Imwe yakatarwa madhora,
Chikamu chakatarwa chenzvimbo yako,
Chikamu chakati chezvivakwa (senge imba kana chivakwa chekutengesa),
Chinhu chakakosha chako pachako, senge basa rehunyanzvi.
Kana iwe uchifarira kudzidza zvakawanda nezve zvakarongwa kupa, email Jennifer Luczkowiak, Director weBudiriro, pa [email inodzivirirwa].
Iwe unogona kusimudzira Prairie State nekutifarira paFacebook kana nekutitevera pa Instagram ne Twitter. Kana iwe uchigovana zvatatumira, iwe unosimudzira basa redu rekupa yakaenzana kuwana kururamisiro nekuunza yako mhuri neshamwari kune masevhisi atinopa kune vavakidzani vavo vanoshaya. Iwe unogona zvakare kugadzira yemagariro enhau fundraiser pachinzvimbo chedu.
Vanhu vazhinji vanopa nguva yavo kuPrairie State nekushanda mukomiti yemunharaunda yekutsvaga mari. Kana iwe uchifarira kudzidza zvakawanda nezve kushandira kukomiti inotsvaga mari, email Daniel Nord, maneja weRutsigiro Rutsigiro, pa [email inodzivirirwa].
Paunotenga paAmazon Smile, Amazon ichapa chikamu chekutenga kwako kuPrairie State Legal Services. Kuti udzidze zvakawanda uye kutenga, shanya Amazon Kunyemwerera.
Zvisiri-mari zvipo zvinosanganisira zvivakwa, hunyanzvi, mota, uye zvimwe zvinooneka zvemunhu chivakwa. Mune zvimwe zviitiko zvinhu izvi zvinogona kuburitsa nyaya dzakakosha uye dzimwe nguva dzisingazivikanwe dzinoita kuti kugamuchirwa kwavo kuve kunetsa. Nekuda kweizvozvo, zvipo zvisiri zvemari zvinowanzo gamuchirwa nePSLS chete kana zvichikwanisa kushandurwa zviri nyore uye neupfumi kuita mari yekudyara uye / kana kushandisa maererano nezvakatangwa nePSLS. Ndokumbira kuti utibate kana iwe uchida kuita isiri-mari chipo.
Kune mibvunzo nezve chero yeiyi nzira yekupa, ndapota nyorera:
Jennifer Luczkowiak, Director weDziviriro ku (224) 321-5643
Prairie State Legal Services isangano rinopa rubatsiro risingaiti-purofiti uye zvipo zvinobvisirwa mutero pasi peiyo IRS chikamu 501 (c) (3). Zvipo zvese zvinogamuchira kubvuma kwakanyorwa uye vanopa vanozivikanwa mune yedu Annual Report. Zvikumbiro zvekugara usingazivikanwe zvinokudzwa.
Mipiro ku Prairie State Legal Services inobvisirwa mutero here?
Ehe, mipiro inobvisirwa mutero; Prairie State Legal Services isangano rinopa rubatsiro pasi peInternal Revenue Code chikamu 501 (c) (3).
Ndinogona here kupa mupiro mukutsigira hofisi yangu yemuno yePSLS?
Pazvinokwanisika, Nyika yePrairie inonanga mipiro kuhofisi yebasa renharaunda munharaunda munobva mipiro. Unogona kunongedza chipo chako kuhofisi iri kunze kwenzvimbo yako nekuratidza hofisi yesarudzo yako.
Mipiro inozivikanwa sei?
Mipiro yese inozivikanwa mu Annual Report. Mipiro yakaitwa kuburikidza ne Mushandirapamwe weMabasa Ezvemitemo anowanzozivikanwa pazviitiko zveMushandirapamwe, mumabharazari emubatanidzwa uye dzimwe nguva mumapepanhau emuno. Zvipo zvinogona kuitwa mukuremekedza kana mundangariro dzeshamwari, mhuri kana vaunoshanda navo. Zvikumbiro zvekugara usingazivikanwe zvinokudzwa zvakare.
Ini ndichagamuchira kusimbiswa kwemupiro wangu here?
Chipo chega chega chinogamuchirwa mutsamba nguva pfupi mushure mekugamuchira chipo. Gore rega rega muna Ndira tinotumira mupiro wega wega pfupiso yezvipo zvese zvakaitwa nemupi mugore rapfuura.
Prairie State Legal Services, Inc.inotsigirwa nemari, muchidimbu, neLegal Services Corporation (LSC). Semamiriro ezvinhu emari yainowana kubva kuLSC, inorambidzwa kuita zvimwe zviitiko mune rese basa rayo repamutemo - kusanganisira basa rinotsigirwa nemamwe masosi emari. Prairie State Legal Services, Inc. inogona kusashandisa chero mari kune chero chiitiko chinorambidzwa neLegal Services Corporation Mutemo, 42 USC 2996, et. seq., kana neRuzhinji Mutemo 104-134, §504 (a). Ruzhinji Mutemo 104-134 §504 (d) inoda kuti chiziviso cheizvi zvirambidzo chipiwe kune vese vanopa mari zvirongwa izvo zvakapihwa mari neLegal Services Corporation Ndokumbirawo ubate Administrative Hofisi yedu ku (815) 965-2134 kuti uwane rumwe ruzivo nezve izvi zvinorambidzwa.